'काम गरूँ काम छैन, काम नगरेपछि कसरी हातमुख जोड्ने ?' - OnlinePatrika.com - News of Nepal, latest and breaking news from Nepal | अनलाइन पत्रिका | समावेशी खबर – आवाजको एउटै थलो
'काम गरूँ काम छैन, काम नगरेपछि कसरी हातमुख जोड्ने ?'
काठमाडौं। कोरोनाको कारण देशमा लकडाउन भएसँगै कयौं मजदूरको रोजीरोटी खोसिएको छ । 'काम गरूँ काम छैन, काम नगरेपछि कसरी हातमुख जोड्ने ?' यस्तै पिडाँ बोकेको रोल्पा घर भई हाल ललितपुर लेले बस्ने २७ वर्षीया सुनिता पुनमगर भोक सहनै नसकेपछि आफ्ना ३ महिने जुम्ल्याहा छोराछोरी बोकेर गाउँमा खानेकुरा मागेर गुजारा चलाउँदै आएकी छिन् ।
१५ वर्षदेखि लेलेको इँटाभट्टामा ज्यालादारी काम गर्दै, त्यसकै परिसरमा बस्दै आएका उनी र श्रीमान् दुवैको रोजगारी खोसिएपछि गुजारा गर्न धौधौ परेको छ । उनी भन्छिन्, ‘लकडाउन खुले पनि भट्टा खुलेन । श्रीमान् मजदुरीको काम खोज्दै हिँड्नुभएको छ तर काम पाइँदैन । काखे बच्चा छन्, खानै नपाएर मरिएलाजस्तो भइसक्यो।’
कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण गत चैतमा गरिएको लकडाउनसँगै इँटा उद्योगहरू बन्द हुँदा सुनिताजस्ता धेरै मजदुर परिवारको बिजोग छ । अहिले सुनिताजस्ता पीडित मजदूरहरूले रोगको डर भन्दा पनि भोकको डर रहेको बताउँदै आएका छन् । त्यसो त यसको पक्षमा सरकारको ध्यान नगएको नै हो । सरकारले मजदुरकोे लागि कुनै कदम नचालेको देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति :कार्तिक २८, २०७७ शुक्रवार - १३:४१:१९ बजे
अब खाडी होइन, मरिसस र जापान !
वडाध्यक्षहरुले लिएका मोटरसाइकल धमाधम फिर्ता